सरकारसँग ४ लाख भेरोसेल खोपमात्र बाँकी : अब लगाउन चाहनेलाई ‘नो चान्स’ « AayoMail
कोरोना संक्रमण भयावह भइरहँदा खोप लगाएका व्यक्तिहरुमा संक्रमण कम हुने र संक्रमण भैहाले पनि कमैलाई गम्भीर बिरामी बनाउने तथ्य अगाडि आइरहेको छ।
सरकारले बैशाख १६ गतेबाट उपत्यका र अन्य जिल्लाहरुमा पनि सोही अनुसार निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गर्नु अगावै २१ लाख मानिसहरुले कोरोना खोप लगाउने अवसर प्राप्त गरेका थिए।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, पत्रकारले पहिलो प्राथमिकतामा खोप लगाएका थिए भने पछि सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई पनि खोप लगाएका थिए। निषेधाज्ञा जारी गर्नुअगाडि १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरुलाई पनि खोप लगाइएको थियो।
भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख कोभिसिल्ड खोप, चीनले दिएको ८ लाख भेरोसेल र नेपाल आफैंले किनेको १० लाख खोप हालसम्म २१ लाखभन्दा बढीले लगाइसकेका छन्।
पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाइसकिएको छ। अब सरकारसँग जम्मा ४ लाख भेरोसेल खोपमात्र बाँकी छ। यो खोप पनि पहिलो मात्राको खोप लगाउनेका लागि संचित गरेर राखिएको छ।
यो भन्दा बढी अब सरकारले कसैलाई पनि खोप दिनसक्ने अवस्था छैन। किनकि सरकारसँग कुनै खोप बाँकी छैन भने खरिद गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रलायका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमकाअनुसार अर्को खोप नभित्रिएसम्म छुटेका कोहीलाई पनि खोप लगाउने दोस्रो चान्स छैन। जेखिम वर्गमा पर्ने जेष्ठ नागरिकहरु खोप लगाउनबाट छुटेका छन्। तर, उनीहरुलाई खोप दिने सामर्थ्य अब सरकारसँग छैन।
‘हामीले पहिले नै सबैलाई खोप लगाउन आह्वान गरेका थियौं। एक महिनाको समयावधि पनि तोकेका थियौं। त्यतिबेला के-के न हुन्छ भनेर डराएर लगाएनन्। जानीजानी छुटे। अब आएर लगाउँछु भनेर कहाँ पाउनु। कसैले पनि खोप नआएसम्म पहिलो मात्रा लगाउन पाउने छैनन्,’ डा. गौतममले भने।
भारतको खोप कम्पनी ‘सेरम इन्स्टिच्युट’ ले भवनमा आगलागी भएको कारण देखाउँदै खोप समयमै पठाउन नसक्ने भन्दै स्वास्थ्य विभागलाई पत्र पठाएको छ भने अन्य देशसँग खोपमा सम्झौता हुन नै बाँकी छ।
भारतबाट २० लाख खोप ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारले १० लाखमात्र हालसम्म प्राप्त गरेको छ भने १० लाख आउनै बाँकी छ।
भारतकै मुख ताकेर बसिरहँदा रसियाबाट ल्याउन लागिएको स्पुतनिक-भी खोपको पत्र मन्त्रालयमै अड्किरहेको तथ्य पनि खुलेको छ। सरकारले भने विश्वमै खोपको अभाव भएको कारण तत्काल खोप खरिद गर्न नसक्ने बताएको छ।
प्रवक्ता गौतमले हाल विश्वमै जम्मा १ अर्ब खोप मात्र उत्पादन गरिएको बताए। ‘संसारभरि ६ अर्ब मानिसहरुलाई खोप लगाउनुपर्छ। जम्मा १ अर्बमात्र खोप बनेको छ। त्यसैले खोप ल्याउन सकिएन।’, उनले भने।
विश्वमा हालसम्म पनि ७५ वटा देशमा खोप कार्यक्रम नै सञ्चालन नभएको भन्दै नेपालमा कमसेकम २१ लाख मानिसले भएपनि लगाउन पाएको उनी बताउँछन्।
‘सरकारसँग पैसा नभएर खोप नल्याएको होइन। खोप खरिदकै लागि भनेर ५० अर्ब इस्टिमेट गरेका छौं। हामीले जहाँबाट सकिन्छ त्यहाँबाट खोप खरिद गर्न तयार छौं।’, उनले भने।